Renode: gịnị bụ usoro a na gịnị kpatara ị ga-eji lebara anya? | Akụrụngwa n'efu
Isaac | | Arduino, General, Ntu Pi
imeghari ohuru Ọ bụ ọrụ na-adịbeghị anya nke ọ bụghị ọtụtụ maara banyere ya, mana nke ahụ nwere ike ịmasị ọtụtụ ndị na-eme ya, ndị na-amu amu na-eme ụdị ihe atụ ha Arduino o Ntu Pi, na ndị mmepe na -emepụta ọrụ IoT na sistemụ agbakwunyere. Maka nke a, ọ nwere ọtụtụ nkwado, nkuzi na ọdịnaya dị na webụ.
Knowmatakwu banyere nke a na-adọrọ mmasị emeghe iyi oru ngo, ị nwere ike ịgụ isiokwu a na ihe ndị dị mkpa iji mata ya wee malite iso ya rụọ ọrụ n'ọdịnihu gị ...
1 Gịnị bụ usoro?
2 Gịnị bụ Renode?
2.1 Nyiwe akwadoro
2.2 Wụnye Renode site na nzọụkwụ na Linux
2.3 Gbaa Renode na oge mbụ na usoro mbụ
2.4 Renode nkuzi
Gịnị bụ usoro?
imeghari ohuru ọ bụ usoro, dị ka ọtụtụ ndị ọzọ. Maka ndị na-amatabeghị ihe nke ahụ bụ, ekwesiri ịmara na usoro bụ ntọala ahaziri nke ọ ga-adabere na ebumnuche dị iche iche, yana iji chekwaa oge, dị ka mmepe, idozi nsogbu, ịgbakwunye nkwado nke mmemme, ọba akwụkwọ, ngwa ọrụ, wdg.
Gịnị bụ Renode?
N'ihe banyere Renode, bu ihe nkpuchi nke ahụ na-enye ohere ịme ngwangwa mmepe nke sistemu jikọtara ọnụ na IoT, na-enye ohere ịmegharị usoro ngwaike anụ ahụ, gụnyere CPUs, akụkụ I / O, sensọ, yana ihe ndị ọzọ dị gburugburu. Ya mere, ọ ga - enye gị ohere ịgba ọsọ, debug ma nwalee ngwanrọ mepụtara na - enweghị gbanwee PC gị ma ọ bụ jiri nyiwe ndị ọzọ.
Ma efere akwadonwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu n'ime ha. Otu n'ime ha bụ Xilinx, ST Micro, Microchip PolarFire, SiFive, wdg.
I kwesịkwara ịma na Renode bụ a emeghe iyi oru ngo, n'agbanyeghị na nkwado azụmahịa nke Antmicro. Na mgbakwunye, ọ na-enye ohere ịmegharị ogwe aka Arm na RISC-V, na-enye ohere mmepe ngwa ngwa na nkwado maka ndị mmepe sọftụwia na-arụ ọrụ na ụwa IoT.
Renode zuru oke, dị ike ma na-arụ ọrụ. Nke ukwuu, na TensorFlow Lite otu onwe ya na-eji ya iji mee ngwangwa mmepe na Ogwe aka na RISC-V nyiwe, yana x86, SPARC, na PowerPC. Enweghị mkpa ịnwe ngwaike anụ ahụ site na nyiwe ndị a maka ule.
Ozi ndị ọzọ - Ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke ọrụ Renode.io
Ma nyiwe akwado maka nhazi Renode, nke ị nwere ike ịrụ ọrụ, bụ:
GNU / Linux (dị na Nchịkọta DEB na RPM yana .pkg.tar.xz maka Arch)
Enwekwara ike iji ya n'ime akpa Docker
Ibu-mara ihe, ọ bụ naanị iri puku kwuru iri MB, yabụ na ọ bụghị ngwugwu dị arọ.
Wụnye Renode site na nzọụkwụ na Linux
Na-ewere Ubuntu distro dị ka ntụnye aka, wụnye Renode ọ dị mfe dịka ịgbaso usoro ndị a:
Nkwado afọ ojuju, dị ka nke Mono:
Mgbe nke ahụ gasịrị, ị ga-eju afọ ndị ọzọ dependencies:
Ugbu a, nweta nke a web na ibudata el Ngwugwu DEB.
Ihe ọzọ ga-abụ gaa na nbudata ihe nbudata ebe ị ebudatara .deb ma wụnye (Cheta iji dochie aha ya na ụdị nke kwekọrọ na gị):
Gbaa Renode na oge mbụ na usoro mbụ
Ugbu a ị nwere ike na-agba Renode na nke mbụ ma malite na oru mbu gi. Maka ogbugbu ya, ị ga-eme iwu ahụ:
Nke a mepere a ọrụ window site na Renode ebe ị nwere ike tinye iwu iji mepụta igwe mbụ ma ọ bụ jikwaa ya. Iji maa atụ, iji mepụta igwe iji gosipụta mbadamba STM32F4Discovery:
I nwekwara ike lee mpụta dị n'elu ikpo okwu na:
Site n'ụzọ igwe-0 ọ ga-abụ aha igwe ndabara ma ọ bụrụ na ị họrọghị ọzọ. Ọ ga - apụta dị ka “oge” ozugbo imepụta igwe ...
para Ibu mmemme chọrọ ịgba ọsọ na igwe anwakọ a iji nwalee ya, ịnwere ike iji ya (ịmaatụ: nke a sitere na Antmicro):
I nwekwara ike buru ya n’adres di n’akuku, iji maa atụ, were ya na ịchọrọ ịwụnye mmemme ị nwere na:
Nwere ike ịhụ iwu niile ị nwere ike iji ma nyere aka ma ọ bụrụ na ị jiri iwu ahụ Enyemaka n'ime gburugburu Renode.
Mgbe ahụ i nwere ike malite iulationomi:
O kwụsị ya na:
Echere m na ọ baara gị uru…
Ọ bụ ezie na ọ naghị adịkarị, enwere ndị ọzọ na ndị ọzọ nkuzi na ebe nrụọrụ weebụ ị nwere ike ịchọta ozi gbasara iji Renode. Na mgbakwunye, ibe gọọmentị n'onwe ya nwere ngalaba nke vidiyo nkuzi nke iji mụta ntọala iji malite ọrụ gị.
Lee akwụkwọ na wiki
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » General » Renode: gini bu ihe owuwu a na gini mere I ji eche?
PCB imewe: otu esi eme ya na ngwa ngwanrọ